Xildhibaan Xuseen Carab Ciise: Qadar waxay Faraxad gelisay Ciidanka Soomaaliyeed, mana ilaabi doono – Kalfadhi
MUQDISHO, 17 JAN 2019 (KALFADHI)-Dowladda Qadar ayaa maanta ku wareejisay Dowladda Soomaaliya 68 gaadiidka gaashaaman ah oo ay ugu deeqday Ciidamada Milateriga Soomaaliya. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha Dekeda magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay masuuliyiin ka socda Soomaaliya iyo Qadar.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ah guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka ayaa ka hadlay Munaasabadda ay Dowladda Qadar ku wareejisay gaadiidkaan iyo agab kale oo Ciidan. Xildhibaanka ayaa sheegay in arintaan ay muujineyso xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeyo Soomaaliya iyo Qadar.
“Waxaan u mahadcelinayaa walaalaheyn Qadar, maanta waxay noo muujiyeen garab istaagooda walaalnimo iyo saaxiibtinimadooda quruxda badan”, ayuu yiri Xildhibaan Xuseen Carab Ciise. “ma jirto maalin ka weyn maanta oo ay sugayaan Ciidamada Soomaaliyeed, waa rajo wanaagsan, guushii waa timid, waxaana la qeybsanayaa Farxadda”, ayuu hadalkiisa sii raacsaday Xuseen Carab Ciise.
Guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Golaha Shacabka ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay ka soo gudbayso xiligii ay aheyd in amniga gudaheeda ay sugaan Ciidamo shi-sheeye isagoo carabka ku adkeeyay in qalabkaan iyo gaadiidka maanta loo keenay ay soo afjari doonto in AMISOM laga sugo sugitaanka amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay qaataan Ciidamada Soomaaliyeed masuuliyadda amnigooda sidii ay ugala wareegi lahaayeen Ciidamada AMISOM.
“Ciidamada Soomaaliyeed waa iney la yimaadaan qorshe ay amniga dalkooda kula wareegaan, hada waan heysanaa qalab iyo gaadiid aan ku sii wadno sugidda amnigayna”, ayuu maanta ka sheegay Munaasabad kooban oo maanta lagu qabtay Dekeda magaalada Muqdisho.
Dowladda Qadar ayaa maanta magaalada Muqdisho Dowladda Soomaaliya kula wareejisay tiradii ugu badneed ee gaadiidka dagaalka ah iyo qalab Ciidan. Markab xamuulka qaada oo maalmahan ku xernaa Dekeda Muqdisho ayaa shalay laga dejiyay agabkaan Ciidan, waxaana la sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ka dalbatay Qadar.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed (Amardambe) oo ka qeybgalay Munaasabadda ka dhacday Dekeda magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale u mahadceliyay Dowladda Qadar. “Waan ku Faraxsanaay in maanta aan la wareegno 68 gaari oo gaashaaman, Ciidamadaynu waxay ku jiraan soo kabasho deg deg ah”, ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed.
Doorka dhismaha Ciidamada Soomaaliya ee Dowladda Qadar ayaa loo arkaa mid ka dambeysay, markii Imaaraadka Carabta uu joojiyay taageeradii Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababaro iyo qalabeyn uu siin jiray, iyadoo sanadkii hore Imaaraadka Albaabada isugu laabay Xero tababar ay gacanta ku hayeen.